NEWS COLLECTION: May 2010
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာသားများ စတင်ပြောင်းရွေ့
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်း အတွက် မေခနှင့် မလိခ မြစ်ဆုံရာ ဒေသရှိ မဇွပ် ကျေးရွာအား ယနေ့တွင် မြစ် ကြီးနား မြို့နယ် အာဏာပိုင် များက စတင် ပြောင်းရွေ့ ခိုင်းခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးမြို့နယ် မယကမှ ဦးဆောင်ပြီး စစ်တပ်၊ ရဲတို့ လိုက်ပါလုံခြုံရေးယူပေးကာ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကြံ့ဖွံ့နှင့်ရပ် ကွက်လုပ်အားပေးအဖွဲ့များက တန်ဖဲကျေးရွာတဖက်ကမ်း မဇွပ်ကျေးရွာအား ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်ဟု တန်ဖဲကျေး ရွာသားက ယခုလိုပြောသည်။
“မယကဥက္ကဌ၊ ဗျူဟာမှူးနဲ့ လုပ်အားပေးအဖွဲ့အချို့ စစ်တပ်နဲ့ရဲက မနေ့ကတည်းက ရောက်ပြီး ည အိပ်တယ်၊ ဒီိနေ့မှာ ကြံ့ဖွံ့နဲ့လုပ်အားပေးအဖွဲ့တွေရောက်ပြီးမဇွပ်ကျေးရွာပေါ၊့ ဗမာလို မြစ်ဆုံလို့ခေါ် တယ်၊ မေခနဲ့ မလိခဆုံတဲ့ထိပ်ကရွာ။ အိမ်ခြေ(၆၃)လုံးရှိတယ်၊ အဲဒီကနေ သူတို့တွေကို ခေါ်လာတော့ တချို့ကလေးတွေရော၊ လူကြီးတွေရော ငိုနေကြတယ်။ အားလုံးမျက်နှာမကောင်းကြဘူး။”
အဆိုပါ ပြောင်းရွေ့လာသူများအား တန်ဖဲကျေးရွာအောက်ဘက် (၈)မိုင်ခန့်အကွာ၊ မြစ်ကြီးနားအထက် မိုင်(၂ဝ)ကျော်အကွာရှိ လုံဂါဇွပ် ကျေးရွာအနီးတွင် အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်ထားသည့် အိမ်ယာစီမံကိန်း မြေ နေရာတွင် နေရာချထားပေးသည်။
ယခုကျေးရွာအားပြောင်းရွေ့နိုင်ရန်အတွက် မြစ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်(၅၈)ရပ် ကွက်မှ တရပ်ကွက်လျင် လုပ်အားပေးလိုက်ရန် လူ(၁ဝ)ဦးစီ ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။
မြစ်ဆုံဒေသရှိ မဇွပ်ကျေးရွာသည် မြေသြဇာကောင်းပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုကြပြီး ယခုပြောင်းရွေ့သည့်နေရာသည် စိုက်ပျိုးမြေ မရှိသည့်အတွက် ဒေသခံများမှာ မပြောင်းရွေ့ ချင်သော် လည်း အာဏာပိုင်များ၏ အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ရဲဘဲ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ရသည်ဟု အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
“အဲဒီရွာက စစ်တပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ် ဖိနှပ်၊ ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်မှာ နေလာတာကြာပြီဆိုတော့ ဘာမှ လည်း ပြန်မလုပ်ရဲကြဘူး။ အခုပြောင်းရွေ့တာ ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူး။”
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့် ကျေးရွာသား(၁၅ဝဝဝ)ကျော် နေရာပြောင်းရွေ့ရနိုင်ပြီး ကချင်တိုင်းရင်းသား တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဖြစ်သည့် မြစ်ဆုံဒေသ ပျောက်ကွယ် မည့်အပြင် တံငါလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ ဆောင် ရေး လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မည်ဖြစ်၍ ဒေသခံများ အပါအဝင် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့များက မြစ်ဆုံရေကာ တာစီမံကိန်း ရပ်တန့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ကချင်ပြည်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်က ရေကာတာရေအားလျပ်စစ် စီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ် နှံထားသည့် တရုတ်လျပ်စစ်စွမ်းအားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) အားရည်ညွှန်း၍ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်း ပေး ရန် တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်းထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
တိုကင် အသုံးပြုသည့် မောင်တောမှ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ၃၀ ကို ရဲက ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း
မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် အစွန်ဆုံး စီးပွားရေး အရ အချက် အချာမြို့ ဖြစ်သည့် မောင်တောတွင် ငွေစက္ကူ အကြွေ ရှားပါး နေသည့် အတွက် ငွေစက္ကူ အစား တိုကင်ပြားများ ထုတ်လုပ် အသုံးပြုနေသည့် ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ၃၀ ကို ရဲက မနေ့က ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း လိုက်သည်။
ရဲက ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း ခံရသူများထဲတွင် ဖြ်ိုးလဘက်ရည် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ ရွှေနှင်းဆီ လဘက်ရည်ဆိုင် ပိုင်ရှင်၊ ခိုင်ထွန်း စားသောက်ကုန် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ စေတနာ စတိုး ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ စန်းသီဟ လဘက်ရည် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ ရွှေပျံလွှား ပိုင်ရှင်နှင့် ပိတောက်ရိပ် စတိုးဆိုင် ပိုင်ရှင်များ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
“ပြသနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို အရင် မရှင်းပဲ ဒီလို ရုတ်တရက် ပိတ်ပင် လိုက်တာဟာ ပြသနာတွေကို ပိုမို ရှုပ်ထွေးသွားအောင် လုပ်လိုက်တာနဲ့ တူတယ်။ ဒီတိုကင်တွေ လည်ပတ်နေတာ ကြာပီဆိုတော့ ဒီလို ပိတ်လိုက်တာဟာ သာမန် ဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်နစ်နာသွားအောင် လုပ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကတော့ ခုလို လုပ်လိုက်တဲ့ အပေါ် အထူး မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နယ်စပ်ဒေသ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း အာဏာပိုင်များက ယခုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိက ငွေတိုကင်များကို ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနောက် ငွေအကြွေ လည်ပတ်မှုရှိလာစေရန် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ် ဒေသ ဌာနခွဲမှ အာမခံ တိုကင်များကို များမကြာမှီ ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စစ်ဆေးနေသဖြင့် ခရီးသွားပြည်သူ များသွားလာရေးအခက်တွေ့နေရသည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားပြီး ရထား လမ်းနှင့် ကားလမ်းများတွင် ကျပ်တည်းစွာစစ်ဆေးနေသဖြင့် ပြည်သူလူထုအခက်အခဲ ဖြစ်နေရသည်ဟု ဒေသခံ ခရီးသွားတစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။
“အခုလက်ရှိကျနော်တို့ ရထားပေါ်မှာရော၊ ကားပေါ်မှာရော သူတို့ ပြည်သူ့ရဲတွေက အုပ်စု ဖွဲ့ပြီးတော့ ရှာဖွေရေးလုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ အခုမိုင်းကွဲတဲ့အပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး သူတို့ရှာဖွေရေး လုပ် တာတွေက ကြိုကြိုကြားကြားနိုက်တဲ့အထိပေ့ါဗျာ။ မရှက်မကြောက်နဲ့ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ခရီးသွား တွေအတွက် တော်တော်လေး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်။”
အာဏာပိုင်တို့က ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် တရားမ၀င်မှောင်ခိုပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရန် အ ကြောင်းပြပြီး လူထုထံငွေညှစ်နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြော သည်။
“အ၀တ်အစားခပ်ညံ့ညံ့ဝတ်တယ်။ လက်ထဲမှာငွေက သိန်းဂဏန်း အထက်ဆိုရင်ဘယ်ကရလဲ၊ ဘာလုပ် လဲ ဘာညာပေ့ါဗျာ အတင်းမေးတော့တာ။ ဒီထက်များတဲ့သူတွေဆိုရင် သီးသန့်ခေါ်ပြီးတော့ကို သီး ခြားစစ်ဆေးတာတွေဗျ။စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကလည်းအမှန်ကငွေညှစ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဘာအထောက် အထားမှ မတွေ့ရင်လည်း ငွေထုတ် နည်းနည်းကြီးလို့ရှိရင် ခေါ်ယူစစ်ဆေးတော့တာပဲ။”
ထို့အပြင် မြစ်ကြီးနားမှ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် လိုင်ဇာမြို့၊ ဗန်းမော်မြို့နှင့် ပူတာအိုဒေသ သို့သွားသည့် ကားလမ်း များတွင်လည်း တင်းကျပ်သည့်စစ်ဆေးမှုကြောင့် ကားသမားနှင့် ကုန်သည်များ အခက်အခဲဖြစ်ယုံသာမက ကုန် ဈေးနှုန်းပါမြှင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု ကုန်သည်များကပြောကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
“ပစ္စည်းတွေချခိုင်းတယ်။ စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ ယာဉ်မောင်းနဲ့ စပယ်ယာတွေက တင်လိုက်ချ လိုက်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ ပင်ပန်းတာပေ့ါဗျာ။ တချို့ငှားချရတာတွေ၊ ဘာတွေ ရှိတော့ ငွေကမလိုအပ် ပဲနဲ့ ကုန်ရတဲ့ခါကျတော့ အဲဒီမှာကုန်ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးတွေက စားသုံးသူတွေလက်ထဲရောက်ရင် မတရား မြှင့်တက်လာတာမျိုးပေ့ါ။”
လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ(၁၇) ရက်နေ့က မြစ်ဆုံရေကာတာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးများတင်းကျပ်စွာချထားခဲ့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မသင်္ကာသူများကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေသော်လည်း တရားခံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ယမန်နေ့နေ့လည်က မြစ်ကြီးနားမှ မန္တလေးမြို့သို့သွားသည့် ရထားလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ နန်ကွေ့ဘူတာအနီး ထောင်ထားသည့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထား သည်။
မင်းသက် | တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၀
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နေပြည်တော်အမြန်လမ်းတွင် ကားဘီးပေါက်ကာ တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ မြေးဖြစ်သူ သေဆုံးမှု မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မောင်ဆက်နိုင်လင်း (ခ) ဖိုးတီလုံး အသက် ၁ နှစ်နှင့် ၄ လသည် အမှတ် ၁ မင်္ဂလာဒုံဆေးရုံကြီးတွင် စနေနေ့ည ၇ နာရီကျော်တွင် ကွယ်လွန်သွား၍ ယနေ့ နေ့လယ်တွင် ရေဝေးသုသာန်တွင် သဂြိုဟ်ခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန်၏ သားဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးဇော်ဇော်အောင်နှင့် သူ၏ဇနီး ဒေါ်ခင်ဆွေရီတို့မှာလည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်၍ အမှတ် ၁ တပ်မတော်ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသခဲ့ရသည်။
ရန်ပိုင် Monday, May 31, 2010
မိုင်းယန်းမြို့၌ ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့် ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်တို့အဖွဲ့ဝင်စုဆောင်း
သျှမ်းပြည်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့်ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်တို့က သြဇာအာဏာသုံး၍ အဖွဲ့ဝင်များ ရှာဖွေစုဆောင်းနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မိုင်းယန်းမြို့ရှိ ၁၁ ရပ်ကွက်မှ ရပ်ကွက်အကြီးအကဲအသီးသီးအား တစ်ရပ်ကွက်လျှင် ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ အတွက် ၁၀ ယောက်၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွက် အယောက် ၂၀ ရှာဖွေစုဆောင်းပေးရန် အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေး တောင်းဆိုထားသည်ဟု ရပ်ကွက်အကြီးအကဲတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့အတွက် မြို့နယ်မှူးနှင့်အပေါင်းပါ ၈ ယောက်က မေ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အချို့ရယကဥက္ကဋ္ဌ နေအိမ်များအထိ သွားရောက်ဖိအားပေးစည်းရုံးစုဆောင်းလျက်ရှိသည်။
မို့နယ်မှူးရဲအုပ်က “သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပြဿနာတွေမှာ ခင်ဗျားတို့ ပါဝင်ကူညီပြီး တိုင်းပြည်အကျိုး၊ ရပ်ရွာအကျိုး အတူတကွသယ်ပိုးလုပ်ကိုင်ကြဖို့၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးအတွက်အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူတွေကိုချေမှုန်းရာမှာ ကျနော်တို့နဲ့လက်တွဲဖို့ စွမ်းအားရှင်နဲ့ပူးပေါင်းရမယ်။ ဒီတရားမ၀င်တဲ့လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေဟာ ကောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုနားချပြောလည်း သဘောမပေါက် လက်မခံကြဘူး”ဟု ပြောဆို စည်းရုံးကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ရပ်ကွက်အကြီးအကဲနှင့်ရပ်ကွက်သားအချို့က “အစိုးရက ကျနော်တို့ရဲ့မိသားစုကို ကူညီထောက်ပံ့ပြီး လုံခြုံမှုအပြည့် အ၀ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ထဲပါဝင်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ လစာငွေ၊ ဆန်စတဲ့အထောက်အပံ့တွေ ပေးမယ်ဆိုပြီး တခါမှလည်းမပေးဘူး။ ကျနော်တို့က မြို့မှာနေပေမဲ့ မြို့ပြင်ကျေးရွာတွေမှာ ၀မ်းစာအတွက်ရှာဖွေ စားသောက်ရတယ်။ ကျနော်တို့အပေါ် သူများအမြင်မှားမှာကြောက်တယ်”ဟု ပြန်လည်ပြောဆို ကြောင်းသူကဆက်လက် ပြောပါသည်။
ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ရန် လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က မိုင်းယန်းမြို့အာဏာပိုင်တို့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သော် လည်း မည်သူမျှမလုပ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်ဆိုသူများသည် မိုင်းယန်းတွင်လာရောက်နေထိုင်သော ကြံ့ဖွံ့၊ မီးသတ်၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်ဗမာများသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြို့နယ်ကြံ့ဖွံ့ပါတီ EC များကလည်း မေ ၂၆ ရက်၌ မိုင်းယန်းမြို့ ၁၁ ရပ်ကွက်မှ သျှမ်း၊ လားဟူ၊ ၀၊ အခါ စသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအား ပါတီဝင်အဖြစ်သိမ်းသွင်းရန် လိုက်လံစာရင်းကောက်စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။
လိုက်လံစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနေကြသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ EC များမှာ ပါမိုင်ရပ်ကွက်နေ လားဟူအမျိုးသား ဦးစောဝေး (၅၀ နှစ်)၊ စိုင်းမွန်း (၅၀ နှစ်)၊ ဈေးတန်းရပ်ကွက်နေ၊ အနာကြီးရောဂါကုဆရာဝန်ဇော်ဝင်းထွဋ် (၅၀ နှစ်)နှင့်အ၀တ်အထည် ဆိုင်ပိုင်ရှင် စိုင်းဆန်ဆမ် ( ၅၀ နှစ်)တို့ဖြစ်ကြသည်။
ပါတီဝင်အဖြစ်လက်ခံသော ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် ဓါတ်ပုံများရိုက်ယူသွားကြောင်း၊ အချို့ ကာယကံရှင်မသိဘဲ နာမည်များကောက်ယူသွားကြောင်းလည်းရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။
မိုင်းယန်းမြို့တွင် မည်သည့်တိုင်းရင်းသားပါတီမှ လာရောက်စည်းရုံးမဲဆွယ်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ကြံ့ဖွံ့ပါတီတစ်ခုတည်း သာစတင်စည်းရုံးမဲဆွယ်လှုပ်ရှားလာသည်ဟုဆိုသည်။
စစ်သားစုဆောင်းရာမှ ကလေးငယ်တဦး သေဆုံး
မီးရထားလမ်း လုံခြုံရေးတပ်က ကလေးစစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခြင်းကို လက်မခံပဲ ထွက်ပြေးသူကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်တဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ယခုလ (၁၆) ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ဝါးရုံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ စံဖဲကျေးရွာမှ မောင်တင်မင်းနိုင်ကို ပြွန်တံဆာ မီးရထား လုံခြုံရေးအစောင့် တာဝန်ကျသည့် ခမရ (၅၈၆)မှ တပ်သားများက စစ်အသားအဖြစ် စုဆောင်းခြင်းကို လက်မခံဘဲ ထွက်ပြေးသည့်အတွက် သေနတ်ဖြင့် လှမ်းပစ်ရာမှ သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“တင်မင်းနိုင်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ညဘက် ငါးရှာ၊ ဖါးရှာသွားတော့ ရထားလမ်းကင်းစောင့်တဲ့ စစ်သားတွေက သူတို့ကိုဖမ်းပြီး စစ်ထဲဝင်ရမယ်လို့ပြောနေတုန်း တင်မင်းနိုင်က မဝင်ချင်လို့ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတော့ စစ်သားတယောက်က သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်ပစ်တယ်၊ မသေသေးတော့ ခက်ရင်းနဲ့ထိုးသတ်ပြီး ဒိုက်ပုံကြားထဲ ထိုးပြီး မြုပ်ပစ်လိုက်တာ” ဟု ဆွေမျိုးတော်စပ်သူက ပြောသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို တင်မင်းနိုင်နှင့်အတူ ပါသွားသည့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မောင်ကျော်ဝင်းက ပြန်လည်ပြောပြသည့်အတွက် သိရခြင်းဖြစ်ပြီး မောင်ကျော်ဝင်သည်လည်း အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ပြီး ကြောက်လန့်ကာ စိတ်အခြေအနေ မမှန်ဖြစ်နေသည်ဟု ပြောသည်။
“အဲလိုဖြစ်တော့ မောင်ကျော်ဝင်းက ကြောက်လန့်ပြီး စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံတယ်၊ ပြွန်တံဆာအခြေစိုက် စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်က မောင်ကျော်ဝင်းကိုကြည့်ပြီး စိတ်မူမမှန်လို့ ပြန်လွှတ်လိုက်တော့ တင်မင်းနိုင်ဆုံးတာကို သိလို့ ပြွှန်တံဆာ ရဲစခန်းက စစ်ဆေးတာတွေတော့ လုပ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြွန်တံဆာ စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်က မည်သူကိုမှ တိုင်ကြားခြင်း မပြုရန်ပြောဆိုပြီး အသုဘ စရိတ်ထုတ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု တင်မင်းနိုင်၏ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူက ဆက်ပြောသည်။
“စုဆောင်းရေးတပ်အရာရှိက ငွေငါးသိန်းလာပို့ပြီး ခြိမ်းခြောက်တဲ့သဘော ပြောဆိုတာတွေ ရှိတယ်၊ အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်း တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတော့ အခုထိ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူး၊ ကျနော်တို့ကတော့ သူတို့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေတုန်းဘဲ” ဟု ဆက်ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူ တင်မင်းနိုင်မှာ အသက် (၁၆)နှစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းမောင်ကျော်ဝင်းမှာ အသက် (၁၅) နှစ်သာရှိသေးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် အသက်မပြည့်သေးသည့် ကလေးငယ်များမရှိကြောင်း ပြောဆိုနေသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုများမှာ နေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေလျှက်ရှိပြီး စစ်သားစုဆောင်းရာတွင် အသက်ကို သတ်ဖြတ်သည့် ရာဇဝတ်မှုများကိုပင် ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,31st,2010
( 29 )Depayin Masterminds Wield Power in USDP
( 28 )ကေအဲန်ပီပီ ခေါင်းဆောင်တဦး ကွယ်လွန်
( 27 )Burma's Opposition Not Optimistic About US Sen Webb's Visit
( 26 )ဗလီကျောင်းတွင်းသို့ ဖိနပ်စီးဝင်သော နအဖ အရာရှိများ အပေါ် ဒေသခံ မူဆလင်များ ဒေါပွ
( 25 )Burmese armed groups eye ‘real Union’
( 24 )စစ်တွေမှ လူငယ်တဦး မြောက်ဦး ဘုရားပွဲတွင် ရေနစ်သေဆုံး
( 23 )Myanmar, S Korean businessmen to seek further economic, trade co-op
( 22 )ယာယီပတ်စပို့များ ထိုင်းဘက်တွင် ထုတ်ပေးရန် ညှိနှိုင်း
( 21 )New opposition registers for elections
( 20 )မီးသတ်ဌာနအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှုများ ရှိနေဟုဆို
( 19 )Myanmar suspends2local journals for publishing without censorship
( 18 )ရွှေအမြုတေဆု စာရေးဆရာ ၆ ဦးကို ချီးမြှင့်
( 17 )Boy shot dead for refusing army
( 16 )မြန်မာသို့ လာမည့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အကြံပြုစာပေး
( 15 )Asean's new dilemma: Burma's nuclear ambitions
( 14 )မြောက်ကိုရီးယားက မြန်မာကို ဒုံးကျည်နှင့် နျူကလီးယား နည်းပညာပေး
( 13 )Tackle Burma problem
( 12 )ဂျင်မ် ၀က်ဘ် ခရီးစဉ် မြန်မာ့အရေး ထူးခြားမှုမရှိနိုင်ဟု ဝေဖန်ခံရ
( 11 )Burma's Nuclear Ambition
( 10 )ကလေးမြို့ လေယာဉ်ကွင်း အနီးရှိ အိမ်များ ပြောင်းရမည်
(9)The Dane Behind “Burma VJ” Documentary
( 8 )သီရိမင်္ဂလာဈေး ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု အာဏာပိုင်များ အမိန့်ထုတ်
(7)Myanmar gas reserves behind India’s soft line on junta acts
(6)ရန်ကုန် မြို့ အ၀င် လှည်းကူး ဂိတ်တွင် တရားမ၀င် လက်နက်များ ဖမ်းဆီးမိ
(5)Myanmar, Vietnam to jointly breed sturgeon
(4)စစ်ထဲ ၀င်ရန် ငြင်းဆန်သဖြင့် ကလေးတစ်ယောက် ပစ်သတ်ခံရ
(3)Burma Junta Deserves A Universal Arms-Embargo
(2)ဒီပဲယင်း တိုက်ခိုက်မှု (၇) နှစ် ပြည့်ပေမဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးမယူသေး
( 1 )Protest to save Burma
နအဖအစိုးရမှ ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ကချင်လူငယ်များအား ဖမ်းဆီးနေ
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့်အပတ် မေ ၂၃ရက် (တနင်္ဂနွေ) နေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်၌ ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦး နှင့် လူငယ်အယောက် ၅၀ကျော်အား မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ယင်းဖမ်းဆီးမှု၌ “Wunpawng Amyusha Mungbawng Rapdaw - WMR” ခေါ် ကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ မှ လူငယ်ဌာန ခေါင်းဆောင် ဦးလဘန်ဂမ်အောင်နှင့် ကျန်သည့် အဖမ်းခံရသည့် ကချင်လူငယ်များကတော့ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ စီတာပူ (Shatapru) ရပ်ကွက်မှ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောပါသည်။
“WMR လူငယ်ခေါင်းဆောင် ဦးဂမ်အောင်ကို ညသန်းခေါင်မှာ သူ့အိမ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦး ပြောသည်။
ဦးဂမ်အောင်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့၏ မြောက်ဘက် ၃မိုင်အကွာရှိ အင်ဂျန်ဒုန် နေအိမ်မှ စစ်သားများ၊ စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (စရဖ)၊ ရဲများနှင့် ရပ်ကွက်လူကြီးများ ပူပေါင်းဖမ်းဆီး ခဲ့ဖြင်းဖြစ်သည်။
WMR သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိ ကချင်တမျိုးသားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအဝဝကို စီမံ ဦးဆောင်မှုပေးရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကချင်အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
အခု ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသည့် လူငယ် ၅၀ကျော်ကတော့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) လက်အောက်ရှိ လူငယ်အင်အားစုဖြစ်သည့် “Education and Economy Development for Youth – EEDY” မှ အများစုဖြစ်ကြောင်း လူငယ်မိဘများမှတဆင့်သိရသည်။
အခုလိုဖမ်းဆီမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့၊ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဝန်းတွင် ဗုံးများပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသင်္ကာသူများသည် ကေအိုင်အိုနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေနိုင် သည်ဟု သံသယရှိသဖြင့် EEDY အဖွဲ့ဝင်များကို ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကေအိုင်အို နှင့် ဒေသခံများ ထင်မြင်ချက်ပေးပါသည်။
တဖက်တွင်လည်း ယခုလို ကေအိုင်အို လူငယ်များကို ပစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးမှုသည် ကေအိုင်အို က စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ “နယ်ခြားစောင့်တပ်” အသွင်ပြောင်းရန် ဖိအားခြင်းဖြစ်နိုင် ကြောင်း ဒေသခံ သုံးသတ်သူများပြောသည်။
မေ လဆန်း ၁ ရက်နေ့ကလည်း စီတာကူ ရပ်ကွက်ကပဲ EEDYအဖွဲ့ဝင် မရစ်တူးရိန်ကို သူ့နေအိမ်မှ ရဲများ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး EEDY အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် ဆရာ ထိန ကိုလည်း ဖားကန့်မြို့၌ မေ ၁၄ရက်နေ့က ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
မေလ ၁၉ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရ၏ ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းနှင့် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်ကြီးနားတွင် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည့် EEDY လူငယ်များ ကိုလွှတ်ပေးရန် ကေအိုင်အို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ ကေအိုင်အို အရာရှိများပြောသည်။
သို့သော်လည်း လေးရက်အကြာတွင် အခုလို ကေအိုင်အို လူငယ်များကို မြစ်ကြီးနား အခြေစိုက် မြောက်ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်(မပခ) မှ ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု စစ်တပ်နှင့်နီးစပ်သည့်သတင်းရက်ကွက်က ပြောသည်။
အခုလို စစ်အစိုးရမှ ကေအိုင်အို လူငယ်အများအပြားကို တချိန်ထဲ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းသည် နှစ်ဖက်ကြား ၁၆နှစ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းရေးကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်တန့်ပေးရန် တရုတ်သမ္မတထံ အသနားခံလွှာပို့
ကချင်ပြည် နယ်မြစ်ဆုံ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ရပ်တန့် ပေးရန် ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက် အဖွဲ့(KDNG)က မြန်မာ နိုင်ငံကို မကြာမီ သွားရောက် လည်ပါတ်မည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတထံ ယနေ့ နေ့ စွဲဖြင့် အသနားခံလွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စိတ်ဆန္ဒမပါရုံသာမက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေကာ တာတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွန်ချက်များနှင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းများကိုပါ ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ် သည်ဟု ယင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
စီမံကိန်းရပ်တန့်ပေးရန်အတွက် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ အသနားခံလွှာပေးပို့ခဲ့သော် လည်း တစ်စုံတစ်ရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
အလားတူ တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း CPI ကုမ္ပဏီထံသို့ အသနားခံလွှာ ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက် ယခုလို တရုတ်သမ္မတကြီး ၀ူကျင်းတောဝ်ထံ အသနားခံလွှာပေးပို့တောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု KDNG အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မအားနန်က ယခုလိုပြောသည်။
“တုံ့ပြန်မှုကတော့ မရှိဘူးရှင့်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ကလည်း ဒီလိုနည်းနဲ့ ဆက်ပြီး ဖိအားပေး နေရတာ၊ ကျမတို့ထပ်ပြီးရေးရတဲ့အကြောင်းကလည်း ဒီမြစ်ဆုံဒေသမှာ လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှု တွေ အများကြီးဖြစ်နေတယ်၊ အဲ့ဒါကိုဒီတရုတ်တွေ လစ်လျူရှုထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျမတို့က လည်း ဒီတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးမှသူတို့ကို အဲ့ဒီမှာ ဘာဖြစ်နေ တယ်ဆိုတာ သိခိုင်းစေချင်လို့ ဖိအား ပေးတယ်။ ရေကာတာကို ဆောက်လုပ်ခြင်းက ရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက် သူတို့ကိုစာပို့ထားတယ်။”
စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများ အိုးအိမ်ရွှေ့ပြောင်းခံရပြီး လူမှုဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံစား နေရပုံကို တရုတ်လူ မျိုးများအနေနှင့် သိရှိစာနာနားလည်ပေးနိုင်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်၍ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြော သည်။
“ကျမတို့အနေနဲ့ ဒီစာကိုပေးပို့ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက ကျမတို့ဒီပြည်တွင်း မှာရှိတဲ့လူတွေ ဒီအခက်ခဲကနေ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြားကနေ အဖမ်းခံရမှာစိုးရိမ်ရတဲ့ကြား ကနေပြီးတော့ သူတို့လည်း မရွှေ့ပြောင်းဖို့ ဒီမြစ်ဆုံရေကာတာမတည်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးမှ အမျိုးမျိုးအနေနဲ့တွန်းလှန်နေကြတယ်ပေါ့၊ အဲ့ဒါကို ဒီကျမတို့ KDNG အနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေကူညီတဲ့အနေနဲ့ ဒီတရုတ်တွေကို ပြည်တွင်းက ဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ဟာကိုသိခိုင်း စေချင်လို့ပေါ့ နော်။”
ယင်းမေတ္တာရပ်ခံလွှာအား တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးရုံးနှင့် CPI တရုတ်စွမ်းအင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပို ရေးရှင်းထံသို့ မိတ္တူများပေးပို့ခဲ့သည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအား တရုတ်အစိုးရပိုင် စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် မြန် မာနိုင်ငံမှ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီတို့က လွန်ခဲ့သည့်နှစ်မှစ၍ အကောင်ထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းဦးဆောင်သော သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအဖို့ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၌ သျှမ်းလူမျိုး မဟုတ်သော အခြားတိုင်းရင်းသားများအား မဲဆွယ်စည်းရုံးရန်မှာ အဓိကစိန်ခေါ်မှုကြီးတခုဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
ကျားဖြူပါတီ အနိုင်ရခဲ့ရင် အခြားတိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အဓိကထားကြိုးစားစည်းရုံးရမယ်။ တစညပါတီနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီတို့ကျတော့ ဘာသာစာပေအကြောင်း မပြောပဲ သူတို့ကိုမဲပေးဖို့တစ်ခုတည်း လာပြောနေလို့ ဒေသခံလူသိပ်နားမ၀င်ဘူး”ဟု ပင်လုံဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါ သည်။
SNDP ခေါ် ကျားဖြူပါတီအဖို့ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအချို့ဒေသများ၌ အခြားတိုင်းရင်းသားများအား မဲဆွယ်စည်းရုံးရန် မှာ အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရကြောင်း၊ သာဓကအားဖြင့် လွယ်လင်မြို့နှင့် ပင်လုံမြို့ဆိုလျှင် သျှမ်းလူမျိုးတစ်စုတည်းနေထိုင်သည် မဟုတ်ဘဲ ပအိုဝ်း၊ ယင်းနက်၊ ပလောင်၊ ဗမာနှင့် တရုတ်တို့လည်း နေထိုင်ကြကြောင်း၊ ပအိုဝ်းလူမျိုး လူဦးရေသည် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောဆိုသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွယ်လင်ခရိုင်တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၊ တစညပါတီ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) နှင့် SNDP တို့စတင် လှုပ်ရှားမဲဆွယ်စည်းရုံလာပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“လွယ်လင်ခရိုင်နဲ့ ပင်လုံမြို့နယ်ခွဲတွေမှာ ကျားဖြူပါတီ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုရင် ဦးအောင်ခမ်းထီဦးဆောင်တဲ့ပအိုဝ်း အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အဓိကယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်” ဟု မြို့ခံတစ်ဦးကလည်း ပြောကြားပါသည်။
ဦးအောင်ခမ်းထီဦးဆောင်သော ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) သည် တောင်ကြီး၊ လွယ်လင်နှင့် ပင်လုံမြို့များတွင်လည်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် လွယ်လင်မြို့နှင့်ပင်လုံမြို့တို့တွင် ပြည်သူလူထုသည် ယနေ့အထိရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိဘဲ အချို့ ပါတီများလိုက်လံစည်းရုံးမဲဆွယ်နေသည်ကိုပင် သတိမထားမိကြကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
လုပ်ကြံမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရသူ ကိုးကန့် (၆) ဦး ထောင် ၅ နှစ်စီ ကျ
မြန်မာစစ်တပ်လိုလားသူ ကိုးကန့်ဥက္ကဋ္ဌသစ် ဦးပိုင်ဆုံချိန်အား လုပ်ကြံရန် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ကိုးကန့် လက်နက် ကိုင် (၆) ဦးကို သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) လောက်ကိုင်ခရိုင်တရားရုံးက မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်စီ ပစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ယခင်ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးချိန်လိကျုံး အပါအ၀င် ကျီဝေ ၊ လော်ဝေ ၊ စင့်ရွန်းလျန် ၊ ရှမ့်ရှမ်း ၊ လျှို့ရင်ဟောင်ကျား တို့ (၆) ဦးသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက် ပွဲများအပြီး တစ်လခွဲခန့် အကြာတွင် လုပ်ကြံရန်စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ကိုးကန့်အထူးဒေသ (၁) လောက်ကိုင်မြို့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအမှုကို လောက်ကိုင်တရားရုံးက လုပ်ကြံမှုဖြင့် စွဲချက်တင်အမှုဖွင့်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ပုဒ်မ ၁၉ စ လက်နက်မှုဖြင့် ထောင် (၅) နှစ်စီ တစ်ပြေးညီပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကသျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
“ကိုးကန့်အရေးအခင်းအပြီး ရက် ၄၀ လောက်အကြာမှာ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဖုန်ကျားရှင်းက ပိုင်ဆုံချိန်ကို လုပ်ကြံဖို့ လက်နက်တွေနဲ့ သူတို့ကို လွတ်လိုက်တယ် ”
“ဒါပေမဲ့သူတို့က ပိုင်ဆုံချိန်ကိုမသတ်ချင်လို့ သူတို့လမ်းသူတို့သွားချင်တယ်လို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ပိုင်ဆုံချိန်ကို ပြောတယ် အဲလို ပြောလိုက်တော့ အဖမ်းခံရတယ် ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသူတို့ကို လက်နက်မှုနဲ့ပဲ ထောင် ၅ နှစ်စီချလိုက်တာ ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ တရားခံ (၆) ဦးအား လောက်ကိုင်မြို့အချုပ်တွင် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီး ဇွန်လဆန်းပိုင်း တွင် လားရှိုးအကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်က ဦးဖုန်ကျားရှင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်အထူးဒေသ (၁) တပ်ဖွဲ့ အား လက်နက်စက်ရုံတည်ရှိမှု မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုတို့ဖြင့် အကြောင်းပြ၍ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ အပြီး ဦးပိုင်ဆုံချိန်အား ကိုးကန့်ဒေသ ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်က ကိုးကန့်အထူးဒေသ(၁) တပ်ဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
သို့သော် ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း ဗုံးများ မကြာခဏပေါက်ကွဲနေပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှု မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမည့် လူဦးရေစာရင်းများ ကောက်ခံ
ထို့အပြင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင်လည်း ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းကတည်းက လူဦးရေးစာရင်းများ ကောက်ခံနေလျှက်ရှိပြီး ပဲခူးတိုင်းအတွင်း မြို့နယ်အချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်များကို အခကြေးငွေယူကာ လိုက်လံ လုပ်ပေးနေလျှက်ရှိသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,30th,2010
( 17 )အောင်လံက လယ်သမားများ လယ်လုပ်ခွင့်ရသော်လည်း လယ်ထဲဆင်းခွင့် မရ
( 16 )Preview to Burma’s election
( 15 )ကျောင်းအပ်ရာတွင် အလှူခံမှူ နည်းပါးလာဟု ကျောင်းသား မိဘ တစ်ချို့ပြော
( 14 )Armed ethnic groups put junta's election in doubt
( 13 )ရန်ကုန် အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ ဌာနခွဲရုံး မြောက်ဦးတွင် ဖွင့်လှစ်
( 12 )ဒီပဲယင်း အရေး အခင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးတင်ဦးပြောကြားချက်
( 11 )Oil firms eye Myanmar assets
( 10 )ကျောက်စိမ်းတွင်း လုပ်သားများကို ပေါ်တာအဖြစ် ဖမ်းဆီး
(9)After 20 years, political scenario of Burma is still gloomy
( 8 )ကိုဝေဖြိုးအောင်၏ ဖြောင့်ချက် အမှုတွဲ ကူးယူခွင့်မရ
(7)Leaked UN Report Reveals Nork Nuclear Exports
(6)မြစ်ဆုံဒေသမှ ကျေးရွာတစ်ခုကို အာဏာပိုင်များ အတင်း အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်း
(5)Webb Heading to Korea, Thailand, Burma
(4)ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် များတိုင်း အထင်ကြီးစရာမလို
(3)Burma plans an election at the gun point
(2)မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား နည်းပညာ တင်ပို့မှု အမေရိကန် စိုးရိမ်
( 1 )Bowden students focus on Burmese strife
မိဘမဲ့ကလေးများ ပညာရေးအတွက် NLD မှ ဦးဆောင် လှူဒါန်းမည်
မြန်မာ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကော့သောင်း မြို့နယ် အတွင်းရှိ မိဘမဲ့ ကလေးများ ပညာ သင်ကြား နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ် သည့် စာရေး ကရိယာ ပစ္စည်းများ ကော့သောင်း မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက ဦးဆောင် ၍ လှူဒါန်း သွားမည်ဟု ပါတီ ခေါင်းဆောင် တဦးက ပြောသည်။
မြို့ပေါ် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် မိဘမဲ့ကလေးများကို စတင် လှူဒါန်းမည်ဟု အမည် မဖော်လိုသည့် ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အဓိကကတော့ မိဘမဲ့ကလေးတွေပေ့ါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်းတွေလေ။ ကျောင်းမနေ နိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ဘုန်းကြီးတွေက စာသင်ပေးနေတာတွေရှိတယ်။ အဓိက အဲဒီကျောင်းတွေကိုပဲ လှူမယ်လေ။ နောက်ရပ်ကွက်ထဲမှာ တကယ့်ဆင်းရဲတဲ့ ရပ်ကွက်တွေထဲက စာသင်ချင်တဲ့ ကလေးတွေ ကို ကျောင်းအပ်ပေးမယ်။ စာရွက်စာတမ်း ထောက်ပံ့ ပေးမယ်ပေ့ါ။”
ယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုရန် NLD ပါတီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး နောက် ပိုင်း အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှာစကားအရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်ထည် ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပြောတာကိုး။ နောင်တချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး အတွက်ကိုဘဲ သူအာရုံစိုက်မယ်လို့ပြောတော့ အဲဒီဒေါ်စုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ လည်း အများကြီးပါတာ ပေ့ါလေ။ အခုလုပ်နေတာတွေက။”
ကော့သောင်းမြို့ပေါ်၌ မိဘမဲ့ကလေးများအား စာသင်ပေးသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၇ ကျောင်းရှိပြီး NLD ပါတီ ၀င်ဟောင်းများနှင့် စေတနာရှင်များက စုပေါင်းလှူဒါန်း ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မိဘမဲ့ကလေးဦးရေ အတိအကျရနိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်ကျေးရွာများ တွင် စာရင်းကောက်ယူ နေဆဲဖြစ်ပြီး စာရေးကရိယာများအပါအ၀င် စာအုပ်ဒါဇင် တစ်ရာကျော် ကောက်ခံရရှိထားပြီး ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် လှူဒါန်းမည်ဟု သိရသည်။
NLD ပါတီ၏ လုပ်ဆောင်နေမှုများအား စစ်အစိုးရမှ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေသော်လည်း တစုံတစ်ရာ နှောင့်ယှက်မှုမရှိသေးပါ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနှင့် ယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော် မရှင်ထံမှတ်ပုံတင် ခြင်း မရှိသော်လည်း ပါတီရုံးများကို ဆက်လက်ဖွင့်ထား၍ ပါတီအလံကို လည်း တင်ထားဆဲဖြစ်သည်ဟု ကော့ သောင်း NLDပါတီ ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
ယခုလ ၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ သားသမီးများအား ပါတီ၏ လက်ကျန် ရံပုံငွေထဲမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပါတီရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဗန်းမော်အနှိပ်ခန်းများ ဆက်ကြေးပိုပေးလာရ၊ နှိပ်ခဈေးတက်
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့ပေါ်ရှိ အနှိပ်ခန်းများမကြာခဏအပိတ်ခံရကာ ဆက်ကြေးပေးပြန်ဖွင့်နေရသဖြင့် နှိပ်ခ ဈေးနူန်းများ မြင့်တက်လာသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလလယ်ပိုင်းမှစ၍ မြို့ပေါ်ရှိ အနှိပ်ခန်းများ ပိတ်လိုက်၊ ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေပြီး မြို့နယ်မယကနှင့် ရဲတို့ အား ပုံမှန်လစဉ်ကြေးအဖြစ် တလကျပ်တသိန်းစီ ဆက်ကြေးပေး ဆောင်နေရသည်ဟု အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်များနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက အနှိပ်ခန်းတွေက ပြည့်တန်ဆာခန်းလို ဖြစ်သွားတယ်။ မတရား သောင်း ကျန်းနေတာ။ တရုတ်သစ်လောပန်းတွေတောင် ပွဲစားတွေကတဆင့် တောထဲ ခေါ်တာတွေလုပ်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ရဲတွေ၊ အက်စ်ဘီတွေ၊ မယကတွေလည်း ငွေပိုညှစ်ဖို့ အကွက်ရသွားတယ်။ အထက် လူကြီးတွေက ဗန်းမော်ခဏခဏလာတော့ ပိတ်ပေးရတယ်၊ ခဏခဏပိတ်ရဆိုတော့ နှိပ်ခက သင်္ကြန် တုန်းကအထိ တနာရီ ကျပ်သုံးထောင်ဘဲ။ အခုလေးထောင်၊ ဈေးတက်လိုက်တယ်၊ ဆက်ကြေးပေးရ တာက လည်း အရင်ကခုနှစ်သောင်း၊ ရှစ်သောင်းလောက်နဲ့ ဈေးညှိလို့ရတယ်။ အခုကတော့ တဖွဲ့ တ သိန်းလို့ပြောတယ်။ အထက်ကိုပါ ပေးရတာမို့တဲ့။ အထက်ကိုရောက်၊ မရောက်တော့ မသိဘူး။” ဟု ဗန်း မော်ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
ဗန်းမော်မြို့ပေါ်၌ အနှိပ်ခန်း(၈)ခန်းရှိ၍ အားလုံးမှာ အနှိပ်ခန်းထက် ပြည့်တန်ဆာခန်းလို ဖြစ်နေပြီး အရက်၊ ဘီ ယာ၊ ရာဘဆေးပြားများပါ ရနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
“အနှိပ်ခန်းကနေ တည်းခိုးခန်းကိုခေါ်သွားပေါ့။ ဆယ်နာရီစာ ကျပ်သုံးသောင်းကနေ လေးသောင်းအ ထိ ပေးနိုင်ရင်ရတယ်၊ အနှိပ်ခန်းထဲကနေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူကို ခေါ်ထုတ်သွားပေါ့။ ပိုင်ရှင်က ပြည့်တန် ဆာခေါင်းဖြစ်သွားတာ။ အနှိပ်ခန်းတွေမှာလည်း အရက်၊ ဘီယာ၊ ရာဘတွေရတယ်။”
ယခုအခါ ဘောလုံးပွဲနှင့် နှစ်လုံးထီ၊ ချဲစသည့် လောင်းကစားဒိုင်များမှာ ဥရောပဘောလုံး ကလပ်ရာသီပွဲကုန် ဆုံး၍လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ဆန္ဒပြမှုများကြောင့်လည်းကောင်း ရပ်နားထားပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာပိုင် များက အနှိပ်ခန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးရောင်းသူများထံ ဆက်ကြေးတောင်းမှု ပိုလုပ်လာသည်ဟု အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ပသ ရအောင် ဖျပ်ဖျပ်မိုးစလူးက ၃၇ မင်းထဲမှာ ပါလို့လား … ဦးရုက္ခစိုး
မြန်မာ့ နအဖ စစ်အစိုးရမှ ယခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူပ်ရှားမူ အခမ်းအနား နေ့တွင် ရခိုင် အမျိုးသားများက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေပုံနှင့် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုပုံပါသော မဲပြားများကို အမှတ် ခြစ်ပြီး မဲပေးခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ မဲပေးပွဲကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ကော့ဘဇားခရိုင်ရှိ နွားရုံတောင် ကျေးရွာတွင် မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မဲပေးခဲ့သူ တဦးက “ မဲပြား တပြားတည်းမှာ အပေါ်က ဒေါ်စု ရုပ်ပုံပါတယ်။ အောက်မှာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေပုံပါတယ်။ ရွှေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေပုံမှာ အမှတ်ခြစ်ရတယ်။ ရွှေးကောက်ပွဲကို မထောက်ခံရင် ဒေါ်စုပုံမှာ သွားပြီး အမှတ်ခြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ်ခြစ်ပီး လျို့ဝှက် မဲပုံးထဲမှာ ထည့်ရပါတယ်။ ရွှေးကောက်ပွဲကို မထောက်ခံတဲ့သူ များနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာတဲ့ အထိတော့ မဲပုံးကို မဖွင့် သေးပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုကို နွားရုံတောင် ကျေးရွာရှိ ရခိုင်အမျိုးသား အဆောက် အဦးတွင် ဒက္ကား အခြေစိုက် ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံးမှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်အမျိုးသမီး အစည်း အရုံး ဥက္ကဌ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက လူပ်ရှားမူ အခမ်းအနား ကျင်းပ ပြုလုပ်ရခြင်းကို ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ နအဖ စစ်အစိုးရ ပြုလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် သက်ဆိုး ရှည်စေဖို့ ဦးတည်ပြီးလုပ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျမတို့ ပြည်သူ တရပ်လုံးက ဘယ်လို ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကို လိုချင်သလဲ ဆိုတာကို ဆန္ဒခံယူပြီး ကမ္ဘာကြီးကို တင်ပြဖို့အတွက် ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ် ရတာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပြည်ပရောက် ရခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးများနှင့် ဒေသခံ ရခိုင်ကျောင်းသား လူငယ်များ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ သုံးလေးဦးမှ ရွှေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ပြီး အများစုက ကန့်ကွက် မဲ ပေးခဲ့ကြသည်ဟု ဒေါ်မြရာဇာလင်းက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒမဲ ကောက်ယူခြင်းဖြင့် တစုံတရာ အတိုင်းအတာထိ မျော်လင့်ချက် ရှိကြောင်းလည်း ဒေါ်စော မြရာဇာလင်းက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ အခုလို ကိုယ့်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပြသတာကို သတင်းဌာနတွေက တဆင့် ပြည်သူတွေ သိသွားမယ်။နောက်ပြီး ကျမတို့အခြေစိုက်တဲ့ ဘင်္ဂလာအစိုး ရကိုလည်း ဒီမဲတွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အမှန်တကယ် ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အိမ်နီးချင်း အစိုးရ တရပ်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်အောင် ဖိအား ပေးပါလို့ ကျမတို့ ဆက်ပြီး တောင်းဆို သွားမယ်။ ကမ္ဘာကြီးက၀ိုင်းပြီး ဖိအား ပေးလာတဲ့အချိန်မှာ နအဖ စစ်အစိုးရကလည်း သူတို့ပြုလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေကို ဆိုဖို့ ခက်ခဲ လာလိမ့်မယ်လို့ ကျမနေနဲ့ ယုံကြည်တယ်။”
ယခု လှုပ်ရှားမူကို မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ် ဘင်ဒရာဘင် ၊ လာမား၊ အလယ်ခေါ်တောင် မြို့နယ်များတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသည့် ရခိုင် အမျိုးသားများ ဆန္ဒများ ကိုလည်း ကောက်ခံထားပြီး စုစုပေါင်း ဆန္ဒမဲပေါင်း ၅၇၉ မဲ ရရှိထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျောင်းသားများက အကြမ်းအားဖြင့် သုံးမျိုးသုံးစား ရှိပါတယ်။ ပထမတမျိုးကတော့ ထိပ်ဆုံးက အထူးအခွင့်အရေးခံနေရတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ကလေးတွေ…။ အဲ့ဒီကလေးတွေက ကျမသိသလောက်တော့ နိုင်ငံခြားမှာ သွားပြီးတော့ ပညာသင်ကြတယ်။ အဲ့တာက လူနည်းစုတွေပါ။ ဒုတိယတမျိုးက ဘာလဲဆိုတော့… နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီး ပညာသင်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိ အခြေအနေ မရှိဘူး…။
ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးပြည့်စုံတော့ သင်တန်းအမျိုးမျိုးတက်ဖို့ လွှတ်ကြတယ်။ ဒီသင်တန်းတွေ လွှတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိပဲ ကလေးတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိမယ်။ တတိယအများစုကတော့… မိဘတွေက ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ အလုပ်ဝင်လုပ်ရတဲ့ ကလေးတွေ…၊ ပညာသင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကို လုံးလုံးစွန့်လိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေ။ အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ… ကျမတို့နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
‘ပညာပဒီပေါ၊ က္ကစ၊ အဓိပဇ္ဇောတော’
လောက၌… ပညာဆီမီးသည် အတောက်ပဆုံးဖြစ်၏။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တင်နက်ဆီပြည်နယ်ရှိ ‘ကင်းတက္ကသိုလ်’ က သူ၏ ရည်မှန်းချက်အား ထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ ကြွေးကြော်သည်။
“ကမ္ဘာမြေအနှံ့မှ ကျောင်းသားအသီးသီး၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အမြင့်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အသားအရောင်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး တကမ္ဘာလုံးမှ အကောင်းဆုံးဦးနှောက်များကို အမြင့်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေရန်” … ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့က…. အစဉ်အလာအရ ပညာကို လိုလားတန်ဖိုးထားကြသည့် လူမျိုးများဟုဆိုချင်သည်။ ဘာသာတရားကလည်း ‘ပညာ’ ၏ တန်ဖိုးတရားများအား ညွှန်ပြ၏။ ဆုံးမပဲ့ပြင်၏။
“ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ၊ လူ့ကိစ္စကို၊ ငယ်က မသင်၊ ပျော်ပါးလွင်မူ
အကြင်သူအား၊ စကားချေတင်၊ သဘင်မပြန့်၊ ခံတွင်းမဲ့သို့၊
ချို့တဲ့ပညာ၊ ညှိုးမျက်နှာနှင့်၊ ရွံ့ရှာစိုးထိတ်၊ အသံဆိတ်၏။”
(ရှင်မဟာရဌသာရ၊ ကိုးခန့်ပျို့ပိုဒ် ၂၆)
မြန်မာ့ပညာရေးအစက ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ယဉ်ကျေးမှုနီတိများနှင့် အခြေတည်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးနှင့် ‘စ’ ၏။ မြန်မာတို့၏ အမျိုးသားပညာရေး သမိုင်းခရီးက ရှည်၏။ ကြမ်း၏။ ဝဲဂယက်အတွင်း ဝဲလယ်၍ နေခဲ့သည်လည်း ရှိ၏။ ပေါက္ခရဝဿပညာရေးကာလက တာရှည်လွန်းလှသည်။ လူမခိုးသည့် ပညာရွှေအိုးအတွက် …. ရွှေအိုးရှိမှ ပညာသင်ကြားနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ….။ ထားတော့…။
ယနေ့ပညာရေးက … ကမ္ဘာလုံးအသွင် ဆောင်လာပြီ။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာရပ်များအား သင်ကြားနိုင်ရန်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများသို့ … ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ပညာရှာလိုသူများ မျက်နှာမူလာကြရပြီ။
ပညာရှာလိုသော လူငယ်များ၏ ပညာရှာခရီးက … ချောမွေ့လွယ်ကူသည့် ပန်းခင်းလမ်းက မဟုတ်…။ အခက်အခဲများကမူ အပြည့်အသိပ်။ အားမာန်၊ ဇွဲလုံ့လဝိရီယ၊ ငွေကြေးတို့နှင့် ရုန်းကန်ကြရသည့် ခရီး…။ ဤခရီးအတွင်း မြန်မာလူငယ်များသည်လည်း လျှောက်လှမ်း၍ နေကြ၏။ အိမ်မောကျနေသည့် ခေါင်းလောင်းများနှင့် ဝေးရာမှသည် .. မြည်ဟည်းနေသည့် ခေါင်းလောင်းသံများ ရှိရာဆီသို့ ….။
ဂျပန်နိုင်ငံ ‘Ritsumeikan Asia Pacific University’ တွင် သွားရောက်၍ ပညာသင်ကြားရန် ရည်မှန်းထားသည်ဆိုလျှင်မူ ပထမဦးစွာ …. ‘Ya Ya Ya’ တွင် စုံစမ်းဆက်သွယ်ရမည်။ Ritsumeikan Asia Pacific တက္ကသိုလ်က … စာ၊ အားကစားနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတခုခုတွင် ထူးချွန်သည့် ကျောင်းသားများအား ဦးစားပေး၍ ခေါ်သည်။ IELTS က 5.5 ရှိဖို့ လို၏။ IELTS အမှတ်ကောင်းလျှင် …. ကောင်းသလို ကျောင်းစရိတ်အား လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေး၏။ ဝင်ခွင့်အင်တာဗျူးကိုမူ …. တယ်လီဖုန်းနှင့်ပင် အင်တာဗျူး၏။
အင်္ဂလန်ကျွန်းမှ …. ‘Wigon & Leigh Collage’ တွင် ပညာသင်မည်ဆိုလျှင်က … ပထမ NLEC (Nawarat) တွင် Wigon & Leigh ၏ Foundation Course အား တတ်ရောက်သင်ကြားရသည်။ ပြီးလျှင် …. စာမေးပွဲဖြေရ၏။ စာမေးပွဲရလဒ်အားကြည့်၍ ကျောင်းဝင်ခွင့်အား ဆုံးဖြတ်သည်။ ဝင်ခွင့်ရ၍ အင်္ဂလန်တွင် ကျောင်းတက်ခွင့်ရပါက …. Higher National Diploma ကို ၂ နှစ် တက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့တခုခုအတွက်ဆက်၍ တက်ရောက်မည်ဆိုပါက … နောက်ထပ် တနှစ်ဆက်၍ တက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Wigon Leigh ကောလိပ်နှင့် သင်ကြားမှုပုံစံက …. Assignment စနစ် ဖြစ်သည်။ မိမိဘာသာမိမိ စာကြည့်တိုက်သွား …. စာအုပ်ရှာဖတ်ရ၏။ Self Study ပုံစံ ….။ မြန်မာပြည်၌ ခေါက်ရိုးကျေနေသည့် သင်ကြားမှုနှင့် အရိုးစွဲခဲ့သည့် မြန်မာလူငယ်များအတွက်မူ …. စိမ်းနေဦးမည့် ပညာရေး …. ဟူ၍ ဆိုရမည်။
စင်္ကာပူရှိ Productivity Standard Board (PSB) Academyက သြစတြေးလျမှ လာ၍ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျောင်းဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူတွင် ၂ နှစ် သင်ကြားရပြီ၊ ၁ နှစ်နှင့် ၆ လအား သြစတြေးလျတွင် ဆက်၍ သင်ယူရသည်။ Productivity Standard Board (PSB) Academy တွင် ကျောင်းတက်မည်ဆိုပါက …. Singapore Education Fair မှတဆင့် Oversea Education Channel (OEC) နှင့် ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့် ရရန်မှာမူ … အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မှတ် ၆ဝ % ရှိရပါမည်။ TOEFL မှာလည်း ၅၅ဝ ရှိမည်ဖြစ်၏။ တရုတ်စာနှင့် တရုတ်စကားလည်း အနည်းငယ်တတ်ဖို့ လို၏။ စင်္ကာပူကျောင်းများတွင်က …. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေနှင့် သင်ကြားသော်လည်း …. တခါတရံတွင် တရုတ်လို ညှပ်၍ပြောသည်များလည်း ရှိ၍ တရုတ်လိုလည်း တတ်ထားရန် လိုပါမည်။ ပြီးလျှင်မူ …. စင်္ကာပူဒေါ်လာတသောင်း Grand ပေး၏။
FIRST YEAR FOUNDATION COURSE တွင် (SAT) မှ ဘာသာရပ်များအား ထည့်သွင်း၍ သင်ကြားရသည့်အတွက် … သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်များအား ကျေညက်ရန် လိုပါမည်။ ၂ နှစ်သင်တန်း ပြီးလျှင်မူ …. သြစတြေးလျ၌ တနှစ်ခွဲ ဆက်၍ သင်ယူရပါသည်။ သြစတြေးလျတွင်က …. ကျောင်းတက်ရင်း … အလုပ်လုပ်ကြရ၏။ ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်လုပ်ရင်းနှင့် သြစတြေးလျတွင် P.R လျှောက်ကြ၏။
Productivity Standard Board (PSB) Academy ၏ အန္တိမက …. သြစတြေးလျတွင် P.R ရရေး …..။ P.R ဟူသည်က Permanent Residence ဖြစ်၏။
နိုင်ငံတကာရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ အကယ်ဒမီတခုခုတွင် ဝင်ခွင့်ပြီးလျှင် …. အဓိကအရေးတကြီး လိုသည်က … စကောလားရှစ်ရရေး ရှာပုံတော် ဖြစ်၏။
ကျောင်းဝင်ခွင့်ရပြီး စကောလားရှစ် ရရှိရန်ကိုမူ Asia Youth Fellow Ship တွင် လျှောက်နိုင်၏။ လွယ်တော့ မလွယ် …။ ဂျပန်ပြည်တွင် ပညာသင်ရန် စကောလားရှစ် ရှာဖွေခဲ့ဖူးသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ ကျောင်းသူတဦး၏ အတွေ့အကြုံက ……
“ကျမလည်း အရင်ကတော့ စကောလားရှစ်နဲ့ နိုင်ငံခြား ပညာသင်သွားဖို့ကိစ္စကို မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။ အခုသွားချင်လို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ Full စကောလားတွေ အများကြီးရှိတာ တွေ့ရတယ်။ စကောလားကတော့ တကယ်တော်တဲ့ လူကိုမှ ရွေးမှာဆိုတော့ တခေါက်ထဲနဲ့ကတော့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားဖို့ လိုတယ်။ ပြောချင်တာက Developing Country တွေအတွက် စကောလားရှစ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ကျောင်းတွေမှာလည်း စုံစမ်းလို့ရတယ်။ Website တွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကြိုးစားရှာကြည့်ကြပါလို့”
ပြီးလျှင် …. သူမကပင် စကောလားရှစ်နှင့်ပတ်သက်၍ သူမအတွေ့အကြုံနှင့်ယှဉ်ပြီး အကြုံပြုထား၏။
“ပထမနှစ်လျှောက်တုန်းက မရခဲ့ဘူး။ အဲဒါ ဘာလို့မပါလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တယ်။ စိတ်ဓာတ်တော့ကျတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ သူတို့တောင်းတတ်တဲ့ TOEFL တွေ IELTS တွေ ကိုယ့်မှာ မရှိဘူး။ အဲဒါတွေ လိုတယ်။ အဲဒါရှိအောင် လုပ်ရမယ်လို့ သိလာတယ်။ နောက်တခါ Essay ကောင်းကောင်းရေးဖို့ လိုတယ်။ စကောလားရှစ်ပေးဖို့ လုပ်တဲ့လူက ကိုယ့်ကို မသိဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်အကြောင်း သူသိအောင် သေသေချာချာ ပြောပြရမယ်။ အမွှန်းတင်ပြောရတာပေါ့။ အဲဒါကို ကိုယ်က ဖြစ်သလိုရေးခဲ့တာ၊ လျှောက်လွှာကိုလည်း ပိတ်ရက်နားကပ်ပြီး တင်ဖြစ်တယ်ဆိုရုံလေး တင်လိုက်တာ။ အခုတခေါက်ကျမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသေချာချာ Guide လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာမနဲ့ တွေ့ပြီး ဆရာမ အကြံပေးသလို Research Proposal ကောင်းကောင်း ရေးတင်နိုင်တယ်။ ပထမနှစ်ခေါက်ထက်စာရင် ကောင်းကောင်း ရေးနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် စကောလားရှစ် လျှောက်ရင်တော့ အက်ဆေးကို အချိန်ပေးပြီး ကောင်းကောင်း ရေးတင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်”
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,28th,2010
( 13 )မွန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၉၀ ရလဒ်ကို ဆုပ်ကိုင်ရန် တိုက်တွန်း
( 12 )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံဖြန့်သူ ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်တိုး
( 11 )၉၀ ရလဒ်အပေါ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ အမြင်
( 10 )မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာသားများ စတင်ပြောင်းရွေ့
(9)ဝါရင့် ခေါင်းဆောင် ၃ ဦး မွန်ပြည်သစ်မှထွက်
( 8 )UN suspects North Korean nuke ties to Myanmar
(7)မင်္ဂလာဈေးက ဈေးသည်များကို ယာယီ ဆိုင်ခန်းဆောက်ပေးမည်
(6)အီးယူ - အာဆီယံက နအဖကို တိုက်တွန်း
(5)North Korea 'is exporting nuclear technology'
(4)မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား နည်းပညာ မြန်မာပြည်ပို့
(3)US Senators Condemn Burma's Regime
(2)NDF ပါတီ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထား
( 1 )Europe, Southeast Asia Burma statement condemned
0စစ်အာဏာပိုင်များ၏ သားသမီး၊ ဆွေမျိုးသားများ၊ ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းကာ ပြည်တွင်းသို့ လိုင်စင်မဲ့ကားများ တရားမ၀င် တင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းကို ဂိုဏ်းပုံစံ အုပ်စုဖွဲ့ လုပ်ကိုင်လာကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အောင်ထက် / ၂၈ မေ ၂၀၁၀
အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူက “ရဲက အကူအညီတောင်းမှ၊ အာမခံမှ၊ ထောက်ခံချက်ပေးမှ ကျနော်တုိ့ သင်္ဂြိုဟ်ပေးပါတယ်။ ဆေးရုံက ရောက်လာတာမှန်ပေမယ့် ရဲက အာမခံရပါတယ်။ ဆေးရုံက သေစာရင်းထုတ်ပေးတယ်။ တချို့ဖြစ်စဉ်တွေကျ မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဌာနတွေက ပေးပါတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းတွင် အလောင်းသယ်ယာဉ် (၁၇) စီးထားရှိပြီး တနေ့ ပျမ်းမျှ ရုပ်ကလာပ် (၄၀ - ၅၀) ခန့် ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ သင်္ကြန်အပြီး အပူချိန် ပြင်းထန်စဉ်က တနေ့လျှင် ရုပ်ကလာပ် (၇၀ - ၈၀) ခန့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရကြောင်း အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲနှင့် ရခိုင်ရိုးရာ ရွှေလောင်း(လှေ) ငါးရှင်လွှတ်ပွဲ ကျင်းပ
ရ ခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်နှင့် ရခိုင်ရိုးရာ ရွှေလောင်း(လှေ) ငါးရှင်လွှတ်ပွဲကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့က စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲတော်ကို စစ်တွေမြို့ရှိ သမိုင်းဝင် လက်ဝဲသလုံးတော်ဓါတ် စေတီတော်တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြို့ခံ တဦးက “ စစ်တွေမြို့ အ၀င်ကား ၀င်ဂိတ်မှ အလွန် လမ်းခွဲကြား ကနေ လက်ဝဲသလုံး တော်ဓါတ် စေတီတည်ရှိတဲ့ လမ်းခွဲ အ၀ထိ ပွဲတော်ကို လာကြတဲ့ သူတွေနဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကား ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲတော်အနီးအနား တ၀ိုက်မှာ ကား၊ ဆိုက်ကယ်၊ taxi နဲ့ ဆိုက်ကား တွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရွှေလောင်း(လှေ) မျောပွဲနှင့် ငါရှင်လွှတ်ပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ကဆုန် ညောင်ရေ သွန်းပွဲ နှင့်အတူ စစ်တွေတွင် ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။ ယခုနှစ် မြန်မာ သက္ကရာဇ်တွင် မေလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ နံယုန်လပြည့် ဖြစ်သော်လည်း ရခိုင်သက္ကရာဇ်တွင်မူ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်နေသဖြင့် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပွဲတော်အား ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
ပွဲတော် ကျင်းပပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်တွေ မြို့ခံက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ ပွဲတော်ကို ကဆုန်လပြည့်နေ့မတိုင်မှီ တရက် အလိုမှာ အရှည် ၁၅ ပေခန့် ရှိတဲ့ ရွှေလောင်း(လှေ) အတွင်းမှာ ရေတွေကို အမွှေးနံ့သာရည်တွေနဲ့ ရောထည့်ထားပြီး လေးဘီးတပ် စင်ပေါ်တင်ပြီး မြို့ကိုလည်ပြီး အပူ ဇော်ခံကြ ပါတယ်။ အဲဒီရွှေလောင်းလှေဆိုတာကတော့ လှေကို ရွှေရောင် စက္ကူတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့သူ မြို့သားတွေ အကုန်လုံး ကောင်းမူ ကုသိုလ် ပြုလုပ်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စီစဉ် လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့သူ မြို့သားတွေက ငါးရှင်တွေကို ၀ယ်ယူပြီး အဲဒီ ရွှေလောင်းထဲမှာ ထည့်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ မြို့သူ မြို့သားတွေ လွှတ်လိုက်တဲ့ ရွှေလောင်းထဲက ငါးတွေနဲ့ အဲဒီ ရွှေလောင်းလှေကို နောက်တနေ့ ကဆုန်လပြည့်နေမှာ စစ်တွေ ကန်တော်ကြီးထဲမှာ လှေကို မျှောလိုက်ပြီး ငါးရှင်တွေကို ရေထဲ လွှတ်လိုက်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရွှေလောင်း(လှေ)၏ ဦးထိပ်တွင် ရခိုင်ရိုးရာတရားပွဲကို ဆင်ယင်ထားပြီး လောင်း(လှေ)ထဲတွင် အမွှေးနံ့သာရည် များဖြင့် ပက်ဖျန်း ပူဇော်ထားသည်ဟု သိရသည်။
“မြို့ကို ရွှေလောင်းလှေနဲ့ လှည့်လည် နေတုန်း ငါးရှင်တွေ ထည့်ထားတော့ ငါးတွေက သေကုန်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုနောက်ပိုင်းမှာ နံသာရည်တွေထည့်ပြီးတော့ အပူဇော်ခံတယ်။ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ကိုရောက်မှပဲ ငါးရှင်တွေကို ရွှေလောင်းလှေထဲကို ထည့်ခွင့် ပြုတယ်”ဟု ကျင်းပရေးကော်မတီ တာဝန်ရှိသူတဦးမှလည်း ဖြည့်စွက် ပြောသည်။
အဆိုပါပွဲကို လက်ဝဲသလုံးတော် ဓါတ်စေတီ ဂေါပကအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပြီး စစ်တွေမြို့ မောလိပ်ရပ်ကွက် ဒေသခံများက အဓိက ဦးဆောင်ကျင်းပရာတွင် ပါဝင်ကြသည်ဟု သိရသည်။
ငါးရှင်ရောင်းသူ တဦးကလည်း “ငါးရှင်တွေကတော့ တော်တော် အရောင်းကောင်းပါတယ်။ ရခိုင်လူထုက ဆင်းရဲတယ် ဆိုပေမယ့် ခုလို အလှူမျိုးဆိုရင် အလှူရေစက် လက်နဲ့ မကွာဆိုသလို ပါဘဲ။ ငါးရှင် ၁၀ကောင်ဆိုရင် ၂၀၀ ကျပ်၊ အကောင် ၃၀ကို ၅၀၀ကျပ်နဲ့ ရောင်းပါတယ်။ လိပ်တွေကျတော့ အရွယ်အစားလိုက် ဈေးနှုန်းကြည့်ပြီး ရောင်းပါတယ်။ အားလုံး ရောင်းကုန်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လူကြီး လူငယ်ဘုရားဖူးသူများ၊ ငါးရှင်လွှတ်သူများ၊ ဆုတောင်းသူများနှင့် အပန်းဖြေသူများဖြင့် ကဆုန်လပြည့်နေ့က စည်ကားနေသလို လက်ဝဲသလုံးတော် ဓါတ်စေတီတွင် ရေချမ်းအိုးများ၊ ဆီမီးများ၊ အမွှေးနံ့သာများ ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ငါးရှင်လွှတ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့သူ အမျိုးသမီး တဦးကလည်း “ ကျွန်မ အပါအ၀င် ရခိုင် လူမျိုးတွေပေါ့နော် အခုအခါ အထူး ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေလည်း ဘာတခုမှ အဆင် မပြေ ကြဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ခုလို တွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေက အမြန်ဆုံး လွှတ်မြောက်ဖို့ ကျွန်မ ငါးရှင် လွှတ်ပြီး တောင်းဆု ပြုခဲ့ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
စစ်တွေတွင် မိုးသည်းသည်းမဲမဲ ရွာသွန်းနေခဲ့သော်လည်း ရွှေလောင်း(လှေ) လှည့်လည် အပူဇော်ခံစဉ်နှင့် ကဆုန်ညောင်ရေသွန်း ပွဲနေ့ အခမ်းအနားတွင် ရာသီဥတု သာယာပြီး မိုးရွာခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့အတွက် ရခိုင်နာမည်ကြီးအဆိုတော်များဖြစ်ကြသည့် ကိုဦးမောင်သိန်း၊ ကိုဦးကျော်လှ၊ စောနှင်းနွယ်၊ ရီလှိုင်းပြာ၊ ငြိမ်းစန္ဒာ နှင့် ၀ါသနာရှင် အဆိုရှင်ကြီးများနှင့် လူငယ်များက မိုနိုတီးဝိုင်း တခုဖြင့် လာရောက်ပြီး ပွဲတော်လာသူများအား ဖြေဖျော်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်၊
ရွှေလောင်း(လှေ)ကို ငါးရှင်များနှင့် အတူ ကဆုန် လပြည်နေ့ ညနေ ၅နာရီတွင် ကန်တော်ကြီး ထဲသို့ ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီနှင့် မြို့သူမြို့သား များက မျောလွှတ်လိုက်ကြပြီး ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ကြသည်ဟု သိရသည်။
RCSS ခေါ် သျှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အသိ အမှတ်ပြု ဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း မေ ၂၆ ရက်နေ့၌ ကြေငြာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်သည်။
နအဖတို့ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ စိတ်ရင်းဆန္ဒမှန် မဟုတ်သောကြောင့် မထောက်ခံနိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ပါရှိသည်။
တစညပါတီနှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီတွင် ပါဝင်ကြမည့် သျှမ်းပြည်မှပြည်သူလူထုအား RCSS က အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံခြင်း မရှိကြောင်း ထိုကြေငြာချက်ကဆို၏။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထူထောင်သည့် ပါတီသစ်များကို ကန့်ကွက်ကြောင်းလည်း ရေးသားထားသည်။
“ဒီလိုဆိုရင် ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ ကျားဖြူပါတီ(SNDP)ဟာ RCSS ရဲ့ ထောက်ခံအသိအမှတ်ပြုမှုရဖို့ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်တယ်” ဟု တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကျားဖြူပါတီအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောကြားပါသည်။
RCSS သည် နအဖနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားသော အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား ပြည်သူ့စစ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းခိုင်းသည့်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ကြောင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို RCSS က စွက်ဖက်ဘက်လိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်း
RCSS က သျှမ်းပြည်လူ့အခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနှင့် UN လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များအား သျှမ်းပြည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသများတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ လာရောက်စုံစမ်းရန် RCSS က တောင်းဆိုကြောင်းပါရှိသည်။
RCSS ခေါ် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီကို ၁၉၉၉ တွင် ဦးဆောင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အဖြစ် လက်ရှိ RCSS ဥက္ကဋ္ဌ စ၀်ယွတ်စစ်က လွယ်တိုင်းလျဲန်း၌ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာသားများ စတင်ပြေ...
တိုကင် အသုံးပြုသည့် မောင်တောမှ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ...
ဦးတေဇနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ၃ ဦး ဘဏ် ...
မိုင်းယန်းမြို့၌ ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့် ပြည်သူ့စွမ်းအား...
နအဖအစိုးရမှ ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ကချင်လူငယ်မ...
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်တန့်ပေးရန် တရုတ်သမ္မတထံ အ...
လုပ်ကြံမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရသူ ကိုးကန့် (၆) ဦး ထေ...
မိဘမဲ့ကလေးများ ပညာရေးအတွက် NLD မှ ဦးဆောင် လှူဒါန်...
ဗန်းမော်အနှိပ်ခန်းများ ဆက်ကြေးပိုပေးလာရ၊ နှိပ်ခဈေ...
မြန်မာ့ နအဖ စစ်အစိုးရမှ ယခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁...
စစ် အာဏာပိုင် အသိုင်းအဝန်းတို့ ဂိုဏ်းဖွဲ့၍ လိုင်စင...
စစ်တွေမြို့တွင် ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲနှင့် ရခိုင်ရ...
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိစ္စ ဇောင်းပေး ...
နအဖ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကန့်ကွက်...
ဓနုတ် စေတီ ပြန်လည် ပြုပြင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမိသား...
ကချင်ပြည်နယ် မီးရထားသံလမ်းတွင် မိုင်းဗုံးတွေ့
မြန်မာစစ်အစိုးရက ကချင်ပြည်သူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,27th,2010
မိုးကြီး တောင်ပြို၊ သစ်ပင်များ လဲ၍ နယ်စပ် ကားလမ်းမ...
မြို့အ၀င်ဂိတ်ကို ဆိုင်ကယ်စီး လူတစုဗုံးပစ် ရဲတစ်ဦး...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,26th,2010
ရှားပါး ကျားပြောက် အရောင်ပါ လိပ်အကောင် ၄၈၀ ဒက္ကားေ...
စက်ရုံကြီးတချို့ လာဘ်ထိုးပြီး လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲခ...
မင်္ဂလာဈေးကို ယာယီဈေး ပြုလုပ်ရန် အစည်းအဝေးပြုလုပ်
နယ်ခြားစောင့်တပ် ဆွေးနွေးရေး ၀ တပ် ငြင်းပြန်
မင်္ဂလာဈေးမီး ညအထိ လောင်ကျွမ်းနေဆဲ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,25th,2010
ဝတပ်ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအား ထပ်မံဆွေးနွေးရန် နအဖ ကမ်းလှမ်း
နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စ ထပ်မံဆွေးနွေးရန် UWSA ကို စစ်...
မြဝတီမြို့ စီးပွားရေးစက်မှုဇုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ပင်လုံကတိပြန်ဖေါ်နိုင်မည်ဟု သှ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,24th,2010
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံအနီးရှိရွာများ အဓမ္မပြောင်းရွှေ့ရေး စစ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,23th,2010
မကြာမီ တွေ့ရတော့မည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေပုံ
ကချင်ပါတီ လူထုစည်းရုံးရေးများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထား
မိုးရာသီဝင်သည်နဲ့ ဖားကန့်ဒေသခံများ မြေစာပုံပြိုကျမ...
၂၀၀၇ (ဗကသ) ခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကို ကို ထပ်တိုး ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,22th,2010
ကျောက်ဖြူ ခယကမှ ရံပုံငွေအတွက် ပြည်သူများထံမှ မတရား...
ပလက်ဝ မြိတ်ဝ စခန်းတွင် သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဗိုလ်ကြီး ထက်ေ...
တာချီလိတ်မြို့နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းပွဲ မို...
ပြည်သူ့စစ် မလုပ်လိုသည့်အပစ်ရပ် SSA တပ်သားအချို့ထွက...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ May,21th,2010
ဦးပိုင်နှင့် ကြံ့ဖွံ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်များ ရမည်